मनोरञ्जन – Page 962 – Etajakhabar
यसरी उल्टो गीत गाउन सक्छन् संगीतकार बसन्त सापकोटा (भिडियो)
ताजाखबर। संगीतकार बसन्त सापकोटाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई धेरै कर्णप्रिय गीतहरु दिइसकेका छन् । विषेशत उनका प्रतिभाहरुले दर्शक श्रोतालाई बेला-बेलामा अचम्ममा पार्ने गरेका छन् । सापकोटाले उल्टो गीत गाउन पनि सक्छन् । हालै एक अन्तरवार्तमा उनको यो क्षमता श्रोता माझ आएको छ । चलचित्र 'शिलशिलाको' 'सागरसरी चोखो माया तिमीलाई दिँउला ...' बोलको गीतबाट सफल बनेका संगीतकार सापकोटाले श्री ५ अम्बरेको, यो मनमा ...
सहयोग संकलन कार्य स्थगित गर्दै धुर्मुस सुन्तली
ताजाखर। अब २५ लाख रकम उठेपछि धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले सहयोग संकलन कार्य रोक्ने भएको छ । गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको छ । अब गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि मात्र २५ लाख रुपैाया आवश्यक छ । पाँच करोड अनुमानित लागतमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण सुरु गरेको परियोजनाका लागि देश तथा विदेशबाट उक्त सहयोग संकलन भएको हो । बस्ती निर्माणका...
‘रुस्तम’को टाइटल ट्रयाक रिलीज (भिडियो)
ताजाखबर। अक्षय कुमारको आगामी फिल्म 'रुस्तम'को टाइटल ट्रयाक रिलीज भएको छ । 'रुस्तम वही' बोलको गीतमा अक्षय कुमारको रुस्तम पावरको भूमिका देखाईको छ । सस्पेंस र थ्र‍िल यो फिल्मको गीतमा पनि थ्रिल देख्न सकिन्छ । गीतमा सन् १९५० को दशको लाइफस्टाइल देखाईएको छ । मनोज मुनताशिरका शब्दमा रहेको यस गीतमा सुक्रिती कक्कड़को आवाज रहेको छ । टीनू सुरेश देसाईको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म केएम नानावटी बनाम महाराष्ट...
करिनाले लन्डनमा गराइन् बेबी टेस्ट
काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता सैफ अली खान र उनकी श्रीमती अभिनेत्री करिना छिटै छोराको बाबुआमा बन्दै छन् । एक वेबसाइटका अनुसार करिनाले लन्डनमा ‘सेक्स डिटरमिनेसन’ (लिंग परीक्षण) गराएकी हुन् । त्यही वेबसाइटले करिना डिसेम्बरमा आमा बन्ने चिकित्सकको हवाला दिँदै दाबी गरेको छ । केही दिनअघि मात्र यी दुई लन्डन पुगेका थिए । त्यतिवेला करिना गर्भवती भएको हल्ला चलेको थियो । तर, दुवैले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ...
फोटो पत्रकारको म्युजिक भिडियो (भिडियो)
ताजाखबर। चर्चित फोटो पत्रकार श्रीधर पौडेलद्वारा निर्देशित गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनकि भएको छ । सुरज शाही ठकुरीको स्वर रहेको 'माया तिमीलाई...' बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । उदेश श्रेष्ठको शब्द तथा संगीतको यो गीतलाई राहुल प्रधानले संगीत संयोजन गरेका छन् । गायक ठकुरीको 'संस्करण' एल्बममा यो गीत समावेश छ । भिडियोमा भावना पुन तथा किरण लाकौलले अभिनय गरेका छन् । गीतको छायांकन पनि निर्देश...
जो इतिहासमा सँधै फेल, उसको ऐतिहासिक खेल
ताजाखबर। आगामी फिल्म 'मोहेन जोदारो'लाई पर्दामा उतार्न तयार रहेमा निर्देशक आशुतोष गोवारिकरले अनौठो कुरा बाहि ल्याएका छन् । बलिउडमा हिट ऐतिहासिक फिल्म दिईरहेका आशुतोष गोवारिकर स्कूले दिनमा इतिहास बिषयमा नै फेल हुने गरेको बताएका छन् । स्कूलमा सँधै इतिहासमा फेल भएपनि उनलाई इतिहासले कहिल्यै छोडेन । उनले इतिहासमा आधारित धेरै फिल्म निर्देशन गरेका छन् । यसपाली पनि इतिहासमा नै आधारित फिल्म 'मोहेन जो...
गायक दिपक लिम्बु भन्छन् ‘दाइको पैसा चोरेँ, चर्कै धुलाइ खाएँ’
काठमाडौँ । जीवन आफैैँमा घटनाहरूको समूह रहेछ । मेरो जीवनमा पनि अनगिन्ती मोड आए, अनेक घटना म अहिले पनि सम्झिइरहन्छु । तर, बाल्यकालका घटना सधैँ सम्झनामा आइरहने रहेछन् । यस्तो किन पनि हुन्छ होला भने सानोका घटनाले मानिसलाई ठूलो शिक्षा दिएर जाने रहेछन् । त्यतिवेला म त्यस्तै आठ–नौ वर्षको थिएँ । एक साँझ दाइको कपडा हेरेँ । दाइले गोजीमा केही पैसा राख्नुभएको रहेछ । मलाई पैसाको महत्व थाहा भइसकेको थियो । घरक...
रीमा विश्वकर्माको नयाँ भिडियो ‘झुल्केको घाम’
ताजा खबर काठमाण्डौं । नेपालमा अधिकांश अभिनेत्री बिहेपछि फिल्म क्षेत्रबाट टाढिन्छन्, अभिनयलाई विश्राम दिन्छन् । झन, एनआरएनसँग बिहे गरेकाहरू त विदेशै भासिन्छन् । तर, अभिनेत्री रीमा विश्वकर्मा यो मामिलामा फरक देखिएकी छिन् । बेलायतमा बस्दै आएका प्रेमीसँग बिहे गरेपछि पनि उनै यतै सक्रिय छिन् । म्युजिक भिडियोमा त उनको व्यस्तता दिनप्रतिदिन बढीरहेको छ । हालै उनले गायक अशोक मुकारुङको ‘झुल्...
आफु नायक हुँ भन्दै नायिका खोज्दै रेखा थापा (भिडियो)
ताजाखबर। आफुलाई चलचित्रको हिरो भन्ने रेखा थापाले अर्को चलचित्र निर्देशन गर्ने भएकी छिन् । उनका अनुसार आगामी चलचित्रको स्क्रिप्टको काम भईरहेको छ । त्यसअघि उनले सविन श्रेष्ठको फिल्म हिरो रिटर्न्समा काम गर्नेछिन् । उनले अहिले कलाकारको खोजी भईरहेको बताएकी छिन् । उनले पुरुष कलाकारको खोजी भएको भएपनि नायिका आवस्यक परेको बताएकी छिन् । उनि आँफैले अभिनय गर्ने फिल्ममा नायिका किन त ? भिडियो हेर्नुहोस...
‘गुड लक’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
ताजाखबर। एक समयकी हिट नायिका श्रृजना बस्नेतले निर्देशन गरेको पहिलो चलचित्र 'गुड लक'को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । साउन १४ गतेबाट रिलिज हुने यो चलचित्रको ट्रेलरमा कमेडी तथा भावनात्मक पक्षलाई देखाईएको छ । एउटी युवतीको जीवनमा आईपर्ने बिभिन्न घटनाक्रम यो चलचित्रमा देखाईने छ । चलचित्र कमेडी कथाबाट सुरु भएर भावानात्मक कथामा गएर सकिने निर्माता, निर्देशक तथा कलाकार श्रृजना बस्नेतले बताइन् । चलचित्र...
Previous 1 … 961 962 963 … 996 Next